Abdominal Pain in Young People - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခုတဈလောတော့ ဆေးခနျးမှာ အတှရေ့မြားနတေဲ့ အကွောငျးလေးတဈခုနဲ့ ပတျသကျပွီး ပဲ့တငျထပျသံလေးတဈခု တငျပွခငျြပါတယျ. ဆရာဝနျတဈယောကျရဲ့ စိတျဓါတျထဲမှာ ရောဂါဝဒေနာ တဈခုဟာ အတှရေ့မြားလာပွီ ဆိုရငျ ဒီဝဒေနာကို ပြောကျအောငျ ကုပေးလိုကျရုံနဲ့ မကနြေပျနိုငျဘဲ ဒါဟာ အကွောငျးအရငျး ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဘာတှမှေားနလေဲ ဆိုတာတှကေို တနျးစီတှေးတော မိတကျပါတယျ။ ဆရာဝနျတဈယောကျဟာ ရောဂါကုသရေးတဈခုတညျး တာဝနျရှိတာမှမဟုတျတာ။ ဒါကွောငျ့လညျး ညနခေငျးမြားရဲ့ ပဲ့တငျသံလေးတှမှော ဆရာဝနျတဈယောကျရဲ့ စတေနာလေးတှေ အရငျးခံကနေ မြှဝပေဲ့တငျထပျနမေိတာပါ။
ဆေးခနျးမှာ ညနဆေိုရငျ ရုံးအပွနျ ကြောငျးအပွနျ ကြူရှုငျအပွနျ ကုမ်ပဏီအပွနျ ဝငျလာကွတဲ့ လူနာတှေ မြားလှပါတယျ။ အမြားစုကတော့ လူငယျ လူလတျတှေ မြားကွပါတယျ။ ယနလေူ့ငယျမြား ဟာမိုးလငျးက မိုးခြုပျတနကေုနျလှုပျရှားမှုမြားနဲ့လုံးခြာလိုကျနကွေတာမြားပါတယျ။ သူတို့လာလိုကျရငျ လညျး မကျြနှာတှေ ညှိုးနှမျးခြူခြာလိုကျကွတာ။ အမြားကတော့ ဗိုကျအောငျ့လို့တဲ့။ ဗိုကျအောငျ့ရခွငျး အကွောငျးရငျးတှဆေိုတာ အမြိုးမြိုးရှိတတျပါတယျ။ ဗိုကျအောငျ့တယျဆိုတိုငျး အစာအိမျကအောငျ့ တာလို့မယူဆနိုငျပမေယျ့ ဆရာဝနျတဈယောကျရဲ့စမျးသပျမှုအရတော့ သူတို့လေးတှအေောငျ့တယျဆို တာအမြားအားဖွငျ့ ရငျညှနျ့အလယျနားကဖွဈတာမြားပွီး ရာဇဝငျအရ အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျး ရောဂါတှဖွေဈနတော မြားပါတယျ။ သူတို့တဈနတေ့ာ အစားအသောကျတှအေကွောငျး မေးလိုကျရငျ စားဖို့အခြိနျမရှိတာတှေ၊ စားရငျလညျး လမျးမှာကွုံတာ၊ ရတာဝယျစား၊ ဝယျသောကျ၊ အိမျကလူတှကေ လညျးအလုပျမြားတော့ ဘာမှပွငျဆငျမပေးနိုငျ။
ကြှနျမတို့ငယျငယျကဆိုရငျ တဈနလေုံ့းမှာ အခြိနျတနျကြောငျးတကျတာတဈခုပဲရှိပါတယျ။ ကြူရှငျဆိုတာလညျး ရှဈတနျးလောကျရောကျမှ သင်ျခြာလောကျ၊ အင်ျဂလိပျစာလောကျပဲတကျပွီး တဈနေ ကုနျအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဆယျတနျးဆိုတာလညျး အခြိနျတနျစားသောကျနားနပွေီးမှ အေးအေး ဆေးဆေး ကြူရှငျသှားရတာ။
စာတှကေလညျး အားလုံးရငျးနှီးပွီးသား၊ နှဈတိုငျးမွငျဖူးနကြေ။ ဘာကကျြရမယျ။ ဘယျလိုပွငျဆငျရမယျဆိုတာ သိပွီးသား။ သငျတဲ့ဆရာတှဆေိုတာလညျး နှဈပေါငျးမြားစှာ အသားကြ အပိုငျသငျနကြေ ဆရာတှေ။ ကှနျပြူတာသငျဖို့ အင်ျဂလိပျကြောငျးတှတေကျဖို့၊ ပွငျသဈစာ၊ ဂပြနျ၊ ကိုရီးယားစကား သငျတနျးတှေ ဘာသငျတနျးမှ တကျဖို့မလို။ ဖဖေတေဈနကေုနျ အလုပျသှားပမေယျ့ မမေကေကြှနျမတို့နဲ့အတူ နှေးထှေးအေးခမျြးမှုတှပေေးလို့။ ကြှနျမတို့အတှကျ စားခြိနျ၊ သောကျခြိနျ၊ အိပျခြိနျဆိုတာကလညျး အခြိနျကိုမှနျလို့။ ကြှနျမတို့စိတျတှဆေိုတာလညျး အေးအေးဆေးဆေး။
ယနခေ့တျေလူငယျတှေ (လူကွီး၊ လူလတျတှလေညျး အပါပေါ့) ကွညျ့လိုကျရရငျတော့ နံနကျ မိုးမလငျးမီလောကျကတညျးက သုတျသုတျစား၊ အပွငျပွေးလှားထှကျ၊ သှားစရာတှကေလညျးမြား၊ အခြိနျတှကေမပေးနိုငျ၊ အစားစားခြိနျမမှနျ၊ ကွုံသလိုစား၊ အစာခွခြေိနျမှာလညျး လူရောစိတျရော မနေ မနား၊ သငျတနျးတကျခြိနျ၊ အလုပျလုပျခြိနျတှပွေညျ့နှကျ။ အငျး … သူတို့အစားကြှနျမဖွငျ့ မောလိုကျတာ၊ ကြောငျးစာဆိုလညျး ကြောငျးစာမို့၊ အပွငျစာဆိုလညျး အပွငျစာမို့၊ ပွီးတော့တဈ ယောကျနဲ့တဈယောကျက အပွိုငျအဆိုငျ သူ့ထကျသာမနာလို ငါ့ထကျသာသှားမှာစိုးလို့ ဝနျတိုရတာနဲ့။ ဖုံးရလြှိုနရေတာနဲ့ လူကွီးတှကေ စိတျပုပျ၊ ကလေးတှရေဲ့ ဖွူစငျတဲ့စိတျကလေးတှဆေုတျယုတျ။ ကဲ …ဘယျမှာလဲ စိတျသကျသာစရာ။
ကြှနျမနဲ့ အမွဲတမျးထိတှနေ့ရေတဲ့ လူငယျတှဟောလညျး စားသုတျသုတျ၊ သှားသုတျသုတျ အခြိနျလုနကွေတဲ့ ကလေးတှခေညျြးပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အစာအိမျလေးတှေ၊ အစာခဖြေကျြမှုစနဈနဲ့ အစိတျ အပိုငျးလေးတှဟော အလှနျပဲ သနားစရာကောငျးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကွမျးဖငျြးလလေ့ာ ကွညျ့ရအောငျ။
လူတို့ရဲ့ ပါးစပျအတှငျးကို အစာစဝငျကတညျးကနေ မလိုတဲ့အစာဟောငျးတှကေို ပွငျပစှနျ့ ထုတျတဲ့ အထိ လူ့ကိုယျတှငျးမှာ အဆငျ့ဆငျ့အစာခဖြေကျြမှုတှဟော ရှုပျထှေးမြားပွားလှပါတယျ။ ဆေးပညာအားဖွငျ့ အသေးစိတျမဟုတျဘဲ အကွမျးဖငျြးပွောပွခငျြပါတယျ။ ဒါမှ အစာအိမျကနေ အစာအိမျရောငျတာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဒီနခေ့တျေစားနတေဲ့ ဗိုကျအောငျ့တယျဆိုတဲ့ ပွဿနာရဲ့ အရငျးခံကို သိနိုငျမှာပါ။
အစာစားလိုကျရငျ ပါးစပျအတှငျးမှာ အစာတခြို့တဈဝကျဟာ တံတှေးထဲမှာပါတဲ့ အငျဇိုငျးတှေ နဲ့ ဓာတျပွုပွီး တဈစိတျတဈပိုငျးအားဖွငျ့ အစာခဖြေကျြပေးပါတယျ။ ဒီနောကျ အစာမြိုပွှနျကနေ တဈဆငျ့ အစာအိမျထဲရောကျပါတယျ။ အစာအိမျထဲမှာ အစာအိမျနံရံက ဆဲလျလေးတှေ အကြိတျလေး တှကေ ထုတျတဲ့ဓာတျပစ်စညျးတှနေဲ့ထိတှေ့၊ အစာခွအေကျစဈတှနေဲ့ ခဖြေကျြ၊ အစာအိမျနဲ့ အူလမျး ကွောငျးတဈလြှောကျရဲ့ လှုပျရှားမှုတှရေဲ့ ရောခွမှေနှေောကျပွီး အစာတှကေို ကွညေကျစတေယျ။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှေ စုပျယူ၊မလိုတာတှေ စှနျ့ပဈပါတယျ။ အစာအိမျအတှငျး မှာ အစာခဖြေကျြတဲ့အကျစဈထုတျလုပျမှုဟာ လူတဈဦးနဲ့တဈဦးမတူပါဘူး။ အကျစဈထုတျလုပျမှုအ ပျေါ လှမျးမိုးတဲ့အကွောငျးအခကျြတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့အနကျ ယနခေ့တျေလူငယျတှရေဲ့ လူနမှေု ပုံစံအရ Stress ချေါတဲ့ စိတျဖိစီးမှု၊ စိတျမှနျးကပျြမှုတှဟောအရေးကွီးတဲ့အခနျးက ပါဝငျလာတာတှေ့ ရပါတယျ။
လူတှရေဲ့ဦးနှောကျဟာ စိတျဖိစီးတငျးကပျြမှုတှနေဲ့ ကွုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့ပွနျတတျ ပါတယျ။ ဒီတုံ့ပွနျမှုဟာ လူတဈကိုယျလုံး နရောအစိတျအပိုငျးအသီးသီးထံ သကျရောကျပါတယျ။ အစာအိမျထဲ မှာတော့ အကျစဈအမွောကျအမွားကိုထှကျရှိစပေါတယျ။ ဒီအခါမှာ အစာအိမျထဲမှာလညျး အခြိနျမှနျ မှနျမစားအားလို့ ခွစေရာ အစာကလညျးမရှိတဲ့အခါ ထှကျလာတဲ့အကျစဈတှဟော တှရေ့ာအစာအိမျ နံရံ၊ အူသိမျဦးစတာတှကေို ခဖြေကျြတိုကျစားပါတော့တယျ။ ဒီအခါမှာ အစာအိမျနဲ့ အူသိမျဦးတှေ ယောငျ၊ အနာတှဖွေဈပွီး ဗိုကျနာတယျဆိုတဲ့ ပွဿနာတှေ ခတျေစားလာတော့တာ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ အစာအိမျရောဂါလို့ လှယျလှယျချေါနကွေပမေယျ့ ဗိုကျ(ရငျညှနျ့) အောငျ့တယျ ဆိုရာမှာ အစာအိမျအနာရယျ၊ အူသိမျဦးအနာရယျလို့ ကှဲပွားပါတယျ။ ကွာလာလို့ နှဈမြိုးစလုံး ရောဖွဈ သှားတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ အစာအိမျအနာကတော့ အစာကွမျးတှေ၊ အစပျအခဉျြတှေ၊ ကွခေဲတဲ့ အစာတှကေို မဆငျမခွငျတရားလှနျစားလို့ရယျ၊ အကျစဈထှကျရှိမှုကကို ပုံမှနျမဟုတျဘဲမြားပွားနလေို့ ရယျ၊ H.Pylori ဆိုတဲ့ ပိုးတဈမြိုးရယျကွောငျ့ စသဖွငျ့ အဖွဈမြားပွီး အစာအိမျရဲ့အဆုံးနားမှာရှိတဲ့ အူသိမျဦးဆိုတဲ့ အစိတျအပိုငျးနားမှာ အနာဖွဈတာကတော့ အစာစားခြိနျမမှနျလို့၊ အကျစဈမြားနလေို့၊ ပိုးတှရှေိနလေို့ စသဖွငျ့ အဖွဈမြားကွောငျး တှရေ့ပါတယျ။
အစာအိမျနာက အစာစားလိုကျရငျ နာပွီး အူသိမျဦးအနာကတော့ အစာစားလိုကျရငျ သကျသာ သှားတတျပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့တော့ အစာအိမျရောဂါ (နှဈမြိုးစလုံးအပါ) တှမှော ကွလှေယျတဲ့အ စာမြိုးကို နညျးနညျးနဲ့ ခဏခဏ အခြိနျမှနျမှနျစားပေးဖို့နဲ့ စိတျဖိစီးတငျးကပျြမှု စိုးရိမျသောကတှေ တတျ နိုငျသလောကျလြှော့ခနြိုငျဖို့ ကွိုးစားရပါမယျ။
ဒါဟာယနခေ့တျေ လူငယျ၊ လူလတျ၊ လူကွီးအားလုံးရဲ့ လူနမှေုပုံစံနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အခွအေနတှေကေို ပွနျလညျ ဆနျးစဈပွုပွငျဖို့ လိုနပွေီဖွဈကွောငျး ညှနျပွနပေါတယျ။ သငျတနျးတှေ၊ ကြူရှငျတှေ၊ အလုပျခှငျတှေ ပွေးလှားနရေလို့ အစာစားခြိနျမမှနျတာမြိုး မဖွဈစဘေဲ ရသမြှကွားအခြိနျ လေးမှာ ငှကျပြောသီးလေးတဈလုံးဖွဈဖွဈ၊ပေါငျမုနျ့ပြော့လေးတဈခုဖွဈဖွဈ ကိုယျနဲ့မကှာဆောငျထား ပွီး ခဏခဏစားပေးပို့လိုပါတယျ။စာမေးပှဲ နားနီးလို့၊ စာတှမေရသေးလို့၊ အငျတာဗြူးတှေ ဝငျခါနီးလို့ အိမျနဲ့ပွဿနာတှဖွေဈလို့ ငှရေေးကွေးရေးအဆငျမပွလေို့ စတဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ တငျးကပျြမှုတှကေို လညျး တတျနိုငျသမြှ ဖွလြှေော့တညျငွိမျစဖေို့ သငျ့တငျ့လြှောကျပတျသော စိတျနှလုံးသှငျးခွငျး အလေ့ အကငျြ့မှေးမွူဖို့လညျး လိုပါတယျ။
ယနခေ့တျေရောဂါတှကေို လလေ့ာကွညျ့လိုကျရငျ ကူးစကျမှုရောဂါပိုးတှကွေောငျ့ ဖွဈပှားရတဲ့ ရောဂါနဲ့ မွို့ပွလူနမှေုစနဈရဲ့ ဆိုးမှကွေောငျ့ ဖွဈနရေတဲ့ရောဂါရယျလို့ နှဈမြိုးတှနေ့ရေပါတယျ။ ဆီးခြို၊ သှေးတိုး၊ နှလုံးစတာတှေ အပါအဝငျ အစာအိမျဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ ပွဿနာဟာလညျး မွို့ပွလူနမှေုစနဈ ရဲ့ အမှဆေိုးတဈခုဖွဈလာတာမို့ ရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျတဲ့၊ပိုဆိုးစတေဲ့ အခကျြတှသေိထားပွီး ဆငျခွငျ ကာကှယျနိုငျဖို့ အသိပေးပဲ့တငျထပျလိုကျရပါတယျ။
အခုတစ်လောတော့ ဆေးခန်းမှာ အတွေ့ရများနေတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပဲ့တင်ထပ်သံလေးတစ်ခု တင်ပြချင်ပါတယ်. ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ထဲမှာ ရောဂါဝေဒနာ တစ်ခုဟာ အတွေ့ရများလာပြီ ဆိုရင် ဒီဝေဒနာကို ပျောက်အောင် ကုပေးလိုက်ရုံနဲ့ မကျေနပ်နိုင်ဘဲ ဒါဟာ အကြောင်းအရင်း ဘာ့ကြောင့်လဲ ဘာတွေမှားနေလဲ ဆိုတာတွေကို တန်းစီတွေးတော မိတက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ ရောဂါကုသရေးတစ်ခုတည်း တာဝန်ရှိတာမှမဟုတ်တာ။ ဒါကြောင့်လည်း ညနေခင်းများရဲ့ ပဲ့တင်သံလေးတွေမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာလေးတွေ အရင်းခံကနေ မျှဝေပဲ့တင်ထပ်နေမိတာပါ။
ဆေးခန်းမှာ ညနေဆိုရင် ရုံးအပြန် ကျောင်းအပြန် ကျူရှုင်အပြန် ကုမ္ပဏီအပြန် ၀င်လာကြတဲ့ လူနာတွေ များလှပါတယ်။ အများစုကတော့ လူငယ် လူလတ်တွေ များကြပါတယ်။ ယနေ့လူငယ်များ ဟာမိုးလင်းက မိုးချုပ်တနေကုန်လှုပ်ရှားမှုများနဲ့လုံးချာလိုက်နေကြတာများပါတယ်။ သူတို့လာလိုက်ရင် လည်း မျက်နှာတွေ ညှိုးနွမ်းချူချာလိုက်ကြတာ။ အများကတော့ ဗိုက်အောင့်လို့တဲ့။ ဗိုက်အောင့်ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုတိုင်း အစာအိမ်ကအောင့် တာလို့မယူဆနိုင်ပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့စမ်းသပ်မှုအရတော့ သူတို့လေးတွေအောင့်တယ်ဆို တာအများအားဖြင့် ရင်ညွန့်အလယ်နားကဖြစ်တာများပြီး ရာဇ၀င်အရ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း ရောဂါတွေဖြစ်နေတာ များပါတယ်။ သူတို့တစ်နေ့တာ အစားအသောက်တွေအကြောင်း မေးလိုက်ရင် စားဖို့အချိန်မရှိတာတွေ၊ စားရင်လည်း လမ်းမှာကြုံတာ၊ ရတာဝယ်စား၊ ၀ယ်သောက်၊ အိမ်ကလူတွေက လည်းအလုပ်များတော့ ဘာမှပြင်ဆင်မပေးနိုင်။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်ကဆိုရင် တစ်နေ့လုံးမှာ အချိန်တန်ကျောင်းတက်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ကျူရှင်ဆိုတာလည်း ရှစ်တန်းလောက်ရောက်မှ သင်္ချာလောက်၊ အင်္ဂလိပ်စာလောက်ပဲတက်ပြီး တစ်နေ ကုန်အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဆယ်တန်းဆိုတာလည်း အချိန်တန်စားသောက်နားနေပြီးမှ အေးအေး ဆေးဆေး ကျူရှင်သွားရတာ။
စာတွေကလည်း အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား၊ နှစ်တိုင်းမြင်ဖူးနေကျ။ ဘာကျက်ရမယ်။ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသား။ သင်တဲ့ဆရာတွေဆိုတာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အသားကျ အပိုင်သင်နေကျ ဆရာတွေ။ ကွန်ပျူတာသင်ဖို့ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေတက်ဖို့၊ ပြင်သစ်စာ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားစကား သင်တန်းတွေ ဘာသင်တန်းမှ တက်ဖို့မလို။ ဖေဖေတစ်နေကုန် အလုပ်သွားပေမယ့် မေမေကကျွန်မတို့နဲ့အတူ နွေးထွေးအေးချမ်းမှုတွေပေးလို့။ ကျွန်မတို့အတွက် စားချိန်၊ သောက်ချိန်၊ အိပ်ချိန်ဆိုတာကလည်း အချိန်ကိုမှန်လို့။ ကျွန်မတို့စိတ်တွေဆိုတာလည်း အေးအေးဆေးဆေး။
ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ (လူကြီး၊ လူလတ်တွေလည်း အပါပေါ့) ကြည့်လိုက်ရရင်တော့ နံနက် မိုးမလင်းမီလောက်ကတည်းက သုတ်သုတ်စား၊ အပြင်ပြေးလွှားထွက်၊ သွားစရာတွေကလည်းများ၊ အချိန်တွေကမပေးနိုင်၊ အစားစားချိန်မမှန်၊ ကြုံသလိုစား၊ အစာခြေချိန်မှာလည်း လူရောစိတ်ရော မနေ မနား၊ သင်တန်းတက်ချိန်၊ အလုပ်လုပ်ချိန်တွေပြည့်နှက်။ အင်း … သူတို့အစားကျွန်မဖြင့် မောလိုက်တာ၊ ကျောင်းစာဆိုလည်း ကျောင်းစာမို့၊ အပြင်စာဆိုလည်း အပြင်စာမို့၊ ပြီးတော့တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အပြိုင်အဆိုင် သူ့ထက်သာမနာလို ငါ့ထက်သာသွားမှာစိုးလို့ ၀န်တိုရတာနဲ့။ ဖုံးရလျှိုနေရတာနဲ့ လူကြီးတွေက စိတ်ပုပ်၊ ကလေးတွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဆုတ်ယုတ်။ ကဲ …ဘယ်မှာလဲ စိတ်သက်သာစရာ။
ကျွန်မနဲ့ အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတဲ့ လူငယ်တွေဟာလည်း စားသုတ်သုတ်၊ သွားသုတ်သုတ် အချိန်လုနေကြတဲ့ ကလေးတွေချည်းပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အစာအိမ်လေးတွေ၊ အစာချေဖျက်မှုစနစ်နဲ့ အစိတ် အပိုင်းလေးတွေဟာ အလွန်ပဲ သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကြမ်းဖျင်းလေ့လာ ကြည့်ရအောင်။
လူတို့ရဲ့ ပါးစပ်အတွင်းကို အစာစ၀င်ကတည်းကနေ မလိုတဲ့အစာဟောင်းတွေကို ပြင်ပစွန့် ထုတ်တဲ့ အထိ လူ့ကိုယ်တွင်းမှာ အဆင့်ဆင့်အစာချေဖျက်မှုတွေဟာ ရှုပ်ထွေးများပြားလှပါတယ်။ ဆေးပညာအားဖြင့် အသေးစိတ်မဟုတ်ဘဲ အကြမ်းဖျင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါမှ အစာအိမ်ကနေ အစာအိမ်ရောင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာရဲ့ အရင်းခံကို သိနိုင်မှာပါ။
အစာစားလိုက်ရင် ပါးစပ်အတွင်းမှာ အစာတချို့တစ်ဝက်ဟာ တံတွေးထဲမှာပါတဲ့ အင်ဇိုင်းတွေ နဲ့ ဓာတ်ပြုပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အစာချေဖျက်ပေးပါတယ်။ ဒီနောက် အစာမျိုပြွန်ကနေ တစ်ဆင့် အစာအိမ်ထဲရောက်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အစာအိမ်နံရံက ဆဲလ်လေးတွေ အကျိတ်လေး တွေက ထုတ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့၊ အစာခြေအက်စစ်တွေနဲ့ ချေဖျက်၊ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်း ကြောင်းတစ်လျှောက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ရောခြေမွှေနှောက်ပြီး အစာတွေကို ကြေညက်စေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ စုပ်ယူ၊မလိုတာတွေ စွန့်ပစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်အတွင်း မှာ အစာချေဖျက်တဲ့အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူပါဘူး။ အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအ ပေါ် လွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့အနက် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ လူနေမှု ပုံစံအရ Stress ခေါ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်မွန်းကျပ်မှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းက ပါဝင်လာတာတွေ့ ရပါတယ်။
လူတွေရဲ့ဦးနှောက်ဟာ စိတ်ဖိစီးတင်းကျပ်မှုတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်တတ် ပါတယ်။ ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာ လူတစ်ကိုယ်လုံး နေရာအစိတ်အပိုင်းအသီးသီးထံ သက်ရောက်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲ မှာတော့ အက်စစ်အမြောက်အမြားကိုထွက်ရှိစေပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အစာအိမ်ထဲမှာလည်း အချိန်မှန် မှန်မစားအားလို့ ခြေစရာ အစာကလည်းမရှိတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့အက်စစ်တွေဟာ တွေ့ရာအစာအိမ် နံရံ၊ အူသိမ်ဦးစတာတွေကို ချေဖျက်တိုက်စားပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာ အစာအိမ်နဲ့ အူသိမ်ဦးတွေ ယောင်၊ အနာတွေဖြစ်ပြီး ဗိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ခေတ်စားလာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အစာအိမ်ရောဂါလို့ လွယ်လွယ်ခေါ်နေကြပေမယ့် ဗိုက်(ရင်ညွန့်) အောင့်တယ် ဆိုရာမှာ အစာအိမ်အနာရယ်၊ အူသိမ်ဦးအနာရယ်လို့ ကွဲပြားပါတယ်။ ကြာလာလို့ နှစ်မျိုးစလုံး ရောဖြစ် သွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အစာအိမ်အနာကတော့ အစာကြမ်းတွေ၊ အစပ်အချဉ်တွေ၊ ကြေခဲတဲ့ အစာတွေကို မဆင်မခြင်တရားလွန်စားလို့ရယ်၊ အက်စစ်ထွက်ရှိမှုကကို ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲများပြားနေလို့ ရယ်၊ H.Pylori ဆိုတဲ့ ပိုးတစ်မျိုးရယ်ကြောင့် စသဖြင့် အဖြစ်များပြီး အစာအိမ်ရဲ့အဆုံးနားမှာရှိတဲ့ အူသိမ်ဦးဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းနားမှာ အနာဖြစ်တာကတော့ အစာစားချိန်မမှန်လို့၊ အက်စစ်များနေလို့၊ ပိုးတွေရှိနေလို့ စသဖြင့် အဖြစ်များကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
အစာအိမ်နာက အစာစားလိုက်ရင် နာပြီး အူသိမ်ဦးအနာကတော့ အစာစားလိုက်ရင် သက်သာ သွားတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အစာအိမ်ရောဂါ (နှစ်မျိုးစလုံးအပါ) တွေမှာ ကြေလွယ်တဲ့အ စာမျိုးကို နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ အချိန်မှန်မှန်စားပေးဖို့နဲ့ စိတ်ဖိစီးတင်းကျပ်မှု စိုးရိမ်သောကတွေ တတ် နိုင်သလောက်လျှော့ချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။
ဒါဟာယနေ့ခေတ် လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီးအားလုံးရဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ပြုပြင်ဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။ သင်တန်းတွေ၊ ကျူရှင်တွေ၊ အလုပ်ခွင်တွေ ပြေးလွှားနေရလို့ အစာစားချိန်မမှန်တာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ ရသမျှကြားအချိန် လေးမှာ ငှက်ပျောသီးလေးတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်၊ပေါင်မုန့်ပျော့လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထား ပြီး ခဏခဏစားပေးပို့လိုပါတယ်။စာမေးပွဲ နားနီးလို့၊ စာတွေမရသေးလို့၊ အင်တာဗျူးတွေ ၀င်ခါနီးလို့ အိမ်နဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ ငွေရေးကြေးရေးအဆင်မပြေလို့ စတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုတွေကို လည်း တတ်နိုင်သမျှ ဖြေလျှော့တည်ငြိမ်စေဖို့ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော စိတ်နှလုံးသွင်းခြင်း အလေ့ အကျင့်မွေးမြူဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ရောဂါတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ကူးစက်မှုရောဂါပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ ရောဂါနဲ့ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်ရဲ့ ဆိုးမွေကြောင့် ဖြစ်နေရတဲ့ရောဂါရယ်လို့ နှစ်မျိုးတွေ့နေရပါတယ်။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးစတာတွေ အပါအ၀င် အစာအိမ်ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ပြဿနာဟာလည်း မြို့ပြလူနေမှုစနစ် ရဲ့ အမွေဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာတာမို့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့၊ပိုဆိုးစေတဲ့ အချက်တွေသိထားပြီး ဆင်ခြင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အသိပေးပဲ့တင်ထပ်လိုက်ရပါတယ်။